Ngesikhathi lapho Inethiwekhi yomhlabajikelele yama--Inthanethi kususa zokuxhumana izithiyo phakathi kwamazwe kanye amazwekazi, abasebenzisi Akasekho besaba ukuthi bazokwenza zigqila ezinkulu by pre-oda ku-inthanethi.
Kuyinto imfihlo ukuthi amabhizinisi amaningi, kanye isimo esiphuthumayo ukubhekana athenga indali angaphandle kanye ezihlukahlukene hhayi abakhuluma isiRashiya ezitolo kuwebhu. Lo mbhangqwana lokugcina eminyakeni Ngiye ngempela wasebenza ngokuphumelelayo nendoda kusungulwe ikhomishana 10% yenani imikhiqizo uthenge noma yini ngakhetha. Nginesifo imodeli ezinjalo ubudlelwane kuhambisana ngokugcwele okwamanje lapho sasingekho isidingo ukuthatha ke izimpahla ezivela eNgilandi. Khona-ke, mina angazi, ukuthi kuyinto forwarder eNgilandi. Eqinisweni omele, okungukuthi, umsizi, ohlala khona, futhi ngenxa yalokho bonke amalungelo isakhamuzi isimo.
Kodwa lolu lwazi ayikwazanga ukungiduduza ngenxa amabhidi yaphela, kodwa umlamuleli ingakamiswa ezitholakele. Njengoba Ngathola kamuva, ukuthuthwa kwezimpahla kusukela UK Kungafezani ikheli ebonakalayo. Nokho, kuyasiza ukuthatha izinto ngaphansi kwemigomo ye isakhamuzi kuleli zwe, iyisevisi ikhokhwe, nakuba eqolo wonke umuntu. Ngakho, kwadingeka ukulethwa olusuka eNgilandi luya e-Ukraine ngosizo ingcebo nomdayisi ohlala phakathi kwemingcele ezungeze imibuso yase-England. Ezinye izimfuno avumele ukuthola umthombo ku shopping virtual angaphandle. I engavamile lensiza eziqukethwe Ukukhetha kummeleli e-UK. Angazi njalo ukucabanga nganquma ukuba abambisane.
Okwamanje, lapho yinethiwekhi yomhlaba jikelele Inthanethi kususa imingcele phakathi kwamazwe kanye amazwekazi, abasebenzisi asesabi ukuthenga enkulu ngokusebenzisa uku-oda ku-inthanethi. Esikhathini esingeside esidlule, ukuyothenga e-UK baye bakhuthaza Russian Umsebenzisi bayabubula sidabuke, manje leli thuba liyatholakala kubo bonke. Ngubani akazi izinkampani eziningi abantu babandakanywe ku-yokufuna kusukela ezimakethe angaphandle, ezitolo ezahlukene intanethi. Eminyakeni yokugcina Ngiye ngasebenza kahle kanye ngomculi, ngubani ngenkokhelo 10 amaphesenti ukubaluleka imikhiqizo ye, aluthola zonke engizikhethayo. Nginalokhu uhlelo yaphelela ehlelelwe isikhathi uma kukhona isidingo hhayi nje ukuthenga izimpahla ezivela eNgilandi. Khona-ke angazi mayelana forwarders. Eqinisweni, yiyo kanye ungumlamuleli eNgilandi, okungukuthi, umsizi, ngubani khona, futhi bonke amalungelo isakhamuzi umlamuleli isimo e-England.
Kodwa into eyodwa ke akazange ngisindise, ngoba endalini yayisizophela ekupheleni, futhi umeleli ingakamiswa ezitholakele. Kamuva ngathola ukuthi ukuthuthwa kwezimpahla e-United Kingdom odabulisa ngisho kusetshenziswa amakheli ebonakalayo. ikheli Virtual eNgilandi, ikuvumela ukuba uthenge izinto ku ilungelo tembuso, kodwa lokhu kungenzeka akulona khulula, nakuba itholakala ngokuphelele wonke umuntu. Ngakho, kwadingeka ukulethwa kwezimpahla olusuka eNgilandi luya Russia iqhaza nomdayisi, ungenisile imingcele yase-England. Ezinye izimfuno ziye zasiza ukuthola umthombo, okuyinto sanikezelwa nokuthenga virtual angaphandle. I engavamile lensiza ngangithambekele ekutholeni ngokushesha umlamuleli eNgilandi. Ngavele bavumelana emsebenzini.
Yiziphi izinzuzo njalo kwesimiso esinjalo yezitolo? Okokuqala, ngazi ukuthi lo mkhiqizo uphephile ngoba yemfanelo nomdayisi azihlanganisi nje kuphela ukuthenga futhi sibudlulisele indawo, kanye nokulawula ukuze ukuseviswa. Phakathi kwezinye izinto, ngigcinile ethile, ngisho bacabanga ukuthi ummeleli wathola umsebenzi wakhe.
Kungcono yini ukuzwa injabulo akusizanga, sithembele ubuqotho abasabalalisi European. Bayanda, ungase uzithele isimo eyaziwa nabasabalalisi ukuhweba ukukhwabanisa.
Khetha Lingerie for girls
Indlela ukukhetha uma liqhathaniswa nezibani elimnandi? uma liqhathaniswa nezibani elimnandi ngezandla
Nova Scotia Duck Tolling Retriever: incazelo Breed netimphawu okuqukethwe